‘लिभिङ टुगेदर’ ओली र प्रचण्ड ! | RajdhaniKhabar
‘लिभिङ टुगेदर’ ओली र प्रचण्ड !
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डवीच पछिल्लो समय पार्टी एकताबारे ‘वान टु वान’ छलफलहरु भइरहेका छन् ।
दुई नेतावीचको छलफल राजनीतिमा मात्रै नभई भावनामा समेत बहकिन थालेको छ । दुई नेताले राजनीतिसँगै आ-आफ्नो स्वाभाव र कमजोरी पनि कोट्याउन थालेका छन्, जुन निकै रोचक छ ।
‘दुई शीर्षनेतावीच भावनात्मक विषयमा खुलेर छलफल हुन थालेको छ,’ वाम गठबन्धनलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउन सक्रिय रहेका एक नेता भन्छन्, ‘ओलीजीले लामो समय जेलभित्र बस्नुपरेका कारण कहिलेकाँही केही कठोरजस्तो देखिने गरेको बताउनुभएको छ भने प्रचण्डजीले विगतमा छापामार युद्ध सञ्चालन गर्दा तत्कालै कार्यनीति फेरिरहनुपर्ने भएकाले आफू अस्थिरजस्तो देखिने गरेको बताउनुभएको छ ।’
प्रचण्ड र केपी ओलीवीचको आपसी विश्वास पार्टी एकताको एउटा महत्वपूर्ण ‘फ्याक्टर’ हो । र, यसका लागि उनीहरुले आ-आफ्नो विचार निर्माणको पृष्ठभूमि र स्वभावजन्य कमजोरीहरुको विश्लेषण गर्नु स्वाभाविकमात्रै होइन, आवश्यक पनि छ ।
ओली र प्रचण्डको स्वाभावजन्य भिन्नताले पार्टी एकतामा साधकको काम गर्छ कि बाधक ? यसबारे पक्कै पनि दुबै
दलका नेताले विश्लेषण गर्लान् । तर, यहाँनेर चाँहि दुबै नेताको हुर्काइ, वर्ग धरातल अनि राजनीतिक पृष्ठभूमिको ‘फ्ल्यासब्याक’ बारे सन्दर्भ उठान गर्न खोजिएको छ ।
मनोवैज्ञानिक ग्यापः ओली फकाउने, प्रचण्ड धकाउने
चरित्रगत मनोविज्ञान विश्लेषण गर्दा केपी ओलीसँग प्रचण्ड अलिकति धकाउने गरेका छन् । ओली मभन्दा केही चतुर छन् र उनीसँग राजनीतिक दाउपेचको क्षमता बढी छ भन्ने प्रचण्डलाई लाग्छ । र, यही कारण उनी ओलीसँग थोरै डराउने र उनीमाथि बारम्बार शंका गर्ने गर्छन् ।
माओवादी जनयुद्धकाल र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि ओली माओवादीप्रति आक्रमक नै थिए, जसका कारण उनीहरुवीच खासै खुलेर सम्वाद भएन । सम्वाद नै गर्दा पनि प्रचण्ड ओलीसँग कम र झलनाथ, माधव नेपाल अनि वामदेव गौतमसँग बढी भर परे ।
अहिले पार्टी एकताको प्रयास अघि बढिरहँदा प्रचण्ड र ओलीवीच भावनात्मक सम्बन्ध बढ्दो छ । तैपनि प्रचण्डले आफूलाई केपी ओलीभन्दा सोझो र कमजोर नै ठान्ने गरेका छन्, जसका कारण उनी ओलीसँग सधैं डराउने र शंका गर्ने गर्छन् ।
जस्तै- यसमा केही दृष्टान्तहरु दिन सकिन्छः
चुनावका बेला केपी ओलीले चितवनमा प्रचण्डको सभामा भाषण गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई कडा आलोचना गरे, जसबाट प्रचण्ड डराए । कतै ओलीले कांग्रेसका मतदातालाई चिढ्याएर मलाई हराइदिन खोजेका त हैनन् ? यस्तो ठानेर प्रचण्डले ओलीमाथि शंका गरे । प्रचण्डको यस्तो शंका वाहीयात रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
चुनाव सकिएपछि पनि ओलीले उपेन्द्र यादवसँग सरकार गठनबारे छलफल गर्नासाथ प्रचण्ड फेरि आत्तिए । कतै ओलीले उपेन्द्र यादवसँग मिलेर माओवादीलाई बाइपास गर्न पो लागेका हुन् कि ? प्रचण्डमा यस्तो डर पलाएपछि ओलीले उनलाई सम्झाइबुझाइ नै गर्नुपर्‍यो ।
केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच टेलिफोनमा कुराकानी भयो । लगत्तै स्वास्थोपचारका लागि ओली बैंकक गए । र, त्यहाँबाट फर्केपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज केपी ओलीलाई भेट्न दिल्लीबाट नेपाल आइन् । यी सबै परिघटनालाई जोडेर प्रचण्ड फेरि ओलीसँग भित्रभित्रै डराएको देखिन्छ । कतै ओलीले भारतसँग मिलेर मलाई बाइपास गर्ने अनि वाम एकता टार्ने त होइनन् ? ओलीमाथि प्रचण्डको आशंका भित्रभित्रै पुत्पुताउन थालेको देखिन्छ ।
यसरी ओलीसँग बारम्बार डराउनु र शंका गर्नुमा प्रचण्डभित्र रहेको ‘ओली फोबिया’ वा हेजिमोनीको मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
हुनत पछिल्लो समयमा केपी ओलीप्रति प्रचण्ड सहज बन्दै गएका छन् । तर, विगतदेखिकै डर र घक पखालिइसकेको छैन । यसरी प्रचण्ड ओलीसँग धकाउनुको अर्को कारण पनि छ, त्यो के हो भने माधव नेपाल पक्षका एमाले नेताहरुसँगको उनको उठबस ।
माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले प्रचण्डसामु केपी ओलीलाई सधैं ‘टेरर’ का रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यसले पनि ओलीलाई हेर्नेबारे प्रचण्डको ‘माइण्डसेट’ मा कुनै न कुनै प्रभाव पार्दै आएको छ ।
प्रचण्डले ओलीमाथि बढ्ता शंका गर्नुको अर्को कारण के पनि हो भने प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभूमि दाउपेच र षडयन्त्रको घोडामाथि सवार भएर नै यहाँसम्म आइपुगेको हो । त्यसैले उनी आफू जस्तो सोच्छन्, अरुलाई पनि त्यस्तै देख्छन् ।
प्रचण्डको यो कमजोरीले पनि काम गरेको छ, ओलीसँगको सम्बन्धमा ।
तर यसमा केपी ओलीको कमजोरीले पनि काम गरेको छ । ओली बोल्दाबोल्दै छुचो बोल्छन् र त्यसले उनीभित्रको भावनात्मक पक्षलाई छोपिदिन्छ र एउटा कठोर केपी ओलीको सकल सतहमा ल्याइदिन्छ । यो चाहिँ केपी ओलीको कमजोरी हो । उनी बाहिर जति छुचो देखिन्छन्, भित्र अलिकति भावुक पनि छन् भन्ने कुरा कमैले मात्र थाहा पाउँछन् ।
तथापि केपी ओली प्रचण्डसँग धकाउँदैनन् । बरु विगतदेखि नै प्रचण्डलाई दपेट्दै आएका कारण उनी प्रचण्डलाई साथैमा लिएर हिँड्न सकिनेमा ढुक्कजस्तै देखिन्छन् ।
तर, ओलीलाई के लाग्ने गरेको छ भने प्रचण्ड अलिकति भर गर्न नसकिने अस्थिर नेता भएकाले भोलि कुनै पनि बेला यिनीबाट धोका पो पाइहालिने हो कि ?
ओलीलाई प्रचण्डसँग डर छैन, तर उतिधेरै भर पनि छैन । वाम एकता हुँदा भोलि प्रचण्डले माधव गुटतिर मिलेर आफूलाई धोका दिने हुन् कि भन्ने आशंका हुनसक्छ । प्रचण्डको विगतको व्यवहार सम्झेर उनी प्रचण्डमाथि आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
त्यसैगरी केपी ओलीले लिँदै आएको राष्ट्रवादी नीति, भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संविधान संशोधनको मुद्दा आदिमा पनि प्रचण्डप्रति ओलीले पूर्णरुपमा भर गर्न सकिरहेका छैनन् । यसबारे एकल भेटहरुमा प्रचण्डले ओलीलाई आस्वस्त पार्न प्रयास गरिरहेका छन् । प्रचण्डले म अस्थिर नेता होइन भन्दै ओलीसँग बारम्बार ‘जस्टिफिकेसन’ दिनुपरिरहेको छ ।
विगतदेखिकै व्यवहार हेर्दा केपी ओली आफूले बोलेको कुराहरुमा सहजैै यताउति हुनेखालका नेता होइनन् । चुनावमा माओवादीलाई दिएका सिटमा पनि ओलीले मुठ्ठी खोलेकै देखिन्छ । उनी आफूले दिएको वचनप्रति धोका दिनेखालका होइनन् भन्ने दाबी ओलीनिटक एमाले नेताहरुले गर्दै आइरहेका छन् । तर, यसबारे एमाले नेताहरुबाट प्रचण्ड अझै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । एमाले नेताहरुले प्रचण्डसामु ओलीको ‘क्रेडिबिलिटी’ बारे बारम्बार प्रष्टीकरण दिइरहनुपरेको अवस्था छ ।
सायद यही कारणले गर्दा तीन दिन अघिको बालकोट बैठकमा अझै पनि ओली र प्रंचण्डवीच छलफलका लागि समय नपुगेको दुबै दलका नेताहरुले निश्कर्ष निकालेका हुन् ।
प्रचण्ड र केपी ओलीवीच भइरहेको मनोवैज्ञानिक ग्याप यहीँनेर हो । यो ग्यापले पार्टी एकतालाई ‘डिले’ बनाइरहेको छ ।
साथै, मधेसी र जनजातिको मुद्दामा प्रचण्ड केपी ओलीभन्दा आफूलाई उदार ठान्छन् । र, यसमा केपी ओली र प्रचण्डवीच एकअर्कालाई गलत र आफू सही देखाउने मनोविज्ञानले पनि घर गरिरहेको अवस्थिति छ ।
बेग्लै वर्गधरातल र इतिहास
प्रचण्ड र ओलीको वर्गधरातल र इतिहास पनि बेग्लाबेग्लै छ । उमेरले केही वर्षमात्रै जेठा केपी ओली झापातिरका कुमाइ बाहुन हुन् भने कान्छा प्रचण्डचाहिँ कास्की-चितवनतिरका पहाडे ब्राह्मण हुन् ।
केपी ओलीले वाल्यकालमा साह्रै दुःख पाए । सानैमा आमाको मायाबाट वञ्चित भएका उनी लगभग सुकुम्बासी परिवारका सदस्य हुन् । ओलीले अर्काकोमा गोठालो बसेर प्राथमिक शिक्षा पढे । यही क्रममा झापा आन्दोलनमा होमिए, भूमिगत भए । निर्वासित भए । अनि जीवनको उर्बर समयजति जेलभित्र रोग अनि भोकले थलिएर बिताए ।
प्रचण्डको वाल्यकाल र किशोरावस्था ओलीको जस्तो कहालिलाग्दो रहेन । उनको परिवार कास्कीबाट चितवन झरेपछि मध्यम वर्गमा रुपान्तरण भयो । प्रचण्डले अर्काको घरमा बसेर हलो जोत्नु परेन । कृषि विषयमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेको र शिक्षण पेशाससमेत गरेको विगत हेर्दा प्रचण्ड केपी ओलीजसरी दुःखमा डुबेनन् भन्न सकिन्छ ।
जतिबेला ओली जेलमा थिए, त्यसबेला प्रचण्ड शिक्षकको जागिरमा थिए । त्यसबेला गाउँको मास्टर भनेको ‘हाइफाई’वाला वर्ग नै मानिन्थ्यो ।
ओली जेलमा हुँदा अल्सरलगायतका रोगले झण्डै छिनेका थिए । प्रचण्डचाहिँ मास्टरी पेशा छाडेर भूमिगत हुँदा पनि पाटनमा डेरा बसेर मम खान पाउने सुविधामा थिए । रहुसे स्वाभावका प्रचण्डले ०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा ‘रुमानी’ हिसाबले नै राजनीति गरे । ओलीका छोराछोरी नभएकाले परिवारवादको जञ्जालमा खासै पर्नुपरेन ।
विगतको यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दा पञ्चायतकालसम्म प्रचण्डको जीवन मध्यमवर्गीय हाइफाइमै बितेको देखिन्छ । माओको भनाइलाई पत्याउने हो भने यस्तो मध्यम वर्गको मानिसको चरित्र सर्वहारा वर्गको भन्दा अलि बढी अस्थिर र ढुलमुले हुन्छ ।
तर, मार्क्सवादी स्कुल अनुसार वर्गविश्लेषण गरिरहँदा यसलाई जडरुपमा हेरिनुहुँदैन । यतिबेला प्रचण्ड डेरामा छन् । केपीओलीको भक्तपुरमा आफ्नै घर छ । र, दमकमा पनि घर छ । ओलीले आफ्नो घरबारे कुनै चिन्ता गर्नुपरेको छैन । स्पष्टीकरण पनि दिनुपर्दैन । तर, प्रचण्ड अहिले पनि डेरावाल नेता हुन् । उनको सम्पत्तिबारे मध्यमवर्गले सधैं प्रश्न सोधिरहन्छ । तर, फेरि पनि यतिबेला न केपी ओली सर्बहारा हुन्, न त प्रचण्ड नै । दुबैको वर्गोत्थान भएकै छ । समाजशास्त्री माक्स वेवरको विश्लेषणलाई मान्ने हो भने ‘वर्ग’को निर्धारण गैरआर्थिक पक्षले पनि गर्छ । ओली र प्रचण्ड दुबै पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । राज्यले उनीहरुलाई खर्चपानी दिने गरेको छ ।
तर, नेताहरुको विचार र स्वाभाव निर्माणमा वर्तमान ‘स्टाटस’ ले मात्रै नभएर उनीहरुको पृष्ठभूमिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
ओली र प्रचण्ड दुबै नेताको विगतको पृष्ठभूमिको हेर्दाखेरि जेलमा बसेका बेला केपी ओलीलाई सोेच्न र अध्ययन गर्न धेरै समय थियो । प्रचण्डचाहिँ दैनिक राजनीतिको व्यस्ततामा थिए ।
पञ्चायतकालभरि केपी ओलीले दुःखको कहर काटे । उनी करिब १४ वर्ष जेल बसे । प्रचण्ड कहिल्यै जेल परेनन् ।
शायद पर्खालभित्र र पर्खाल बाहिरको यो फरक परिस्थितिले केपी ओलीलाई अलि बढी अन्तरमुखी, सोचेर अघि बढ्ने, तर, थोरै मनोगत एवं एकलकाँटे बनायो । प्रचण्डलाई चाहिँ जेल बाहिरको राजनीतिक वातावरणले विपक्षीहरुसँग पनि घुलमिल हुन सक्ने बहिर्मुखी स्वाभावको ‘डाइनामिक’ मान्छे बनायो ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि केपी ओली एकाएक फेरिए । उनी अब जेल पर्नुअघिको सुकुम्वासी वा हलीका रुपमा रहेनन् । उनी सांसद बने । गृहमन्त्री बने । पार्टीको केन्द्रीय नेताका रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिको शिखरमा उक्लिए । पार्टीभित्र कडा खालको तर नदेखिने गुटका सदावहार नेता बने । ०५२ पछि माओवादी जनयुद्धको खरो आलोचक बने । पार्टी फुटाउने माले समूहविरुद्ध जेहाद छेडे । ०५० को दशकपछि ओलीभित्रको सम्पूर्ण उर्जा नेपाली राजनीतिमा मुखरित भयो ।
प्रचण्डचाहिँ बहुदल आएको केही वर्षसम्म नेकपा मशाल नामको सानो पार्टी चलाएर बसे । सो पार्टीको महामन्त्री भएर उनले एमालेमाथि तिब्र वैचारिक हमला गरे । एमालेलाई प्रतिक्रियावादमा पतन भएको शक्ति भनेर पुस्तक लेखे । अनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको फरक धार निर्माण गरेर ०५२ सालदेखि जोखिमपूर्ण सशस्त्र युद्धमा होमिए ।
जसरी संसदीय राजनीतिमा केपी ओलीको हाइट बढिरहेको थियो, सशस्त्र संघर्षको उठानसँगै नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको नाम एकाएक चुलियो । जनयुद्धसँगै दलित, जनजाति, मधेसी, महिला लगायत पिछडिएको सीमान्तीकृत समुदाय राजनीतिको केन्द्र भागमा ह्वात्तै आयो ।
फलस्वरुप प्रचण्डले कोरेको सोही रक्तपातपूर्ण मार्गको बाटो भएर देश गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको अवस्थासम्म आइपुग्यो र त्यसैको जगमा भएको जनआन्दोलनमार्फत अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो ।
केपी ओली पनि माओवादीको विरोध गर्दागर्दै परिवर्तनको प्रवाहमा यहाँसम्म आइपुगे । मदन भण्डारीको निधनपछि ओलीले आफूलाई एमालेभित्र बलियो नेताका रुपमा उभ्याए । माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई समेत उनले फिका बनाइदिए ।
दोस्रो संविधानसभा र खासगरी स्थानीय तहको चुनावसम्म आउँदा केपी ओलीले प्रचण्डको माओवादी धारालाई सुकाएरै अघि बढ्न सकिने ठानेका थिए । तर, स्थानीय चुनावपछि उनले माओवादीलाई शक्तिको रुपमा स्वीकार गरे । अनि पार्टी एकताकै लागि तयार भए ।
केपी ओली मानसिकरुपमा तयार नभएको भए वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रक्रिया वामदेव गौतम वा अरु कसैले चाहेरमात्रै हुने सम्भव थिएन । माओवादीको हकमा पनि प्रचण्डाले चाहेरमात्रै यो सम्भव भएको हो ।
यसरी बेग्लाबेग्लै पृष्ठभूमि, बेग्लै वर्गधरातल, अनि बेग्लै राजनीतिक धुम्तीहरु पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका माओवादी र एमालेका यी दुई शीर्ष नेताहरु अहिले नयाँ सम्बन्धका लागि ‘लिभिङ टुगेदर’ मा जुटेका छन् ।
ओली र प्रचण्डको. यो ‘लिभिङ टुगेदर’ औपचारिक विवाहमा परिणत हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ निकट क्षितिजभित्र अन्तरनिहीत छ ।
ओली र प्रचण्डवीच समानता
केपी ओली र प्रचण्डवीच भिन्नता मात्रै छैन, समानता पनि छन् । र, तिनै समानताले उनीहरुलाई एकताको नजिक ल्याएको हो ।
ओली र प्रचण्डको समस्थितिलाई यसरी हेर्न सकिन्छः
दुबै नेताहरु आ-आफ्नो पार्टीभित्र शक्तिशाली नेता हुन् । उनीहरुले चाहेमा पार्टी एकतालाई कसैले रोक्न सक्दैन र उनीहरुले चाहेनन् भने अरुले चाहँदैमा पार्टी एकता हुँदैन । नेताहरुको व्यवस्थापन, पदको बाँडफाँड, मन्त्रीहरुको चयन, आदि सबैथोक प्रचण्ड र ओलीकै पहुँचमा छ । यो उनीहरुको समस्थिति हो । समरुप हो ।
प्रचण्ड र ओली दुबैजना कुनै जड सिद्धान्तमा टाँसिएर बस्ने स्वाभावका नेता होइनन् । उनीहरुले चाहेको खण्डमा माओवाद वा जबज केहीले पनि एकतालाई रोक्न सक्दैन । दुबै नेता सिद्धान्तमा भन्दा बढी शक्तिमा विश्वास गर्छन् । सत्तामा विश्वास गर्छन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भएको भागवण्डा र त्यसपछि मुख्यमन्त्रीहरुको बाँडफाँडमा ओली र प्रचण्डवीच सहजै कुरो मिलेको देखिएको छ । उनीहरुवीच राजनीतिक लेनदेनमा खासै समस्या देखिएको छैन । दुबै नेताहरु लेन र देनमा उदार देखिएका छन् ।
सुरुमा शंकाको सुविधाहित चुनावी गणितका लागि नजिकिएका प्रचण्ड र ओलीवीच चनाबी सहकार्यसँगै भावनात्मक दुरी क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । यसले गर्दा उनीहरु क्रमशः एकापसमा विलय एवं समर्पित हुने तहसम्म पुग्नसक्ने अनुमान लगाउन अप्ठ्यारो छैन ।
प्रचण्ड र ओलीलाई मिलाउनेहरुमा देशभित्रका केही व्यापारिक घराना एवं स्वार्थसमूहको पनि जोडबल देखिएको छ । ओली र प्रचण्ड दुबैको स्वाभाव उस्तै-उस्तै भएकाले दुबैलाई एकैठाउँमा ल्याउन र पाँच वर्ष सत्तामा राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न स्वार्थसमूहहरु उदत्त छन् । दुई नेतालाई बाहिरियाहरुले परेवालाई डोकाले छोपेजसरी मिलाउन खोजिरहेका छन् ।
तर, घरानियाहरुमात्रै नभएर नेपालको वामपन्थी जनमत, वाम कार्यकर्ता अनि वामपन्थीप्रति झुकाव राख्ने मतदाताहरु पनि कम्युनिष्टका नामको एउटै पार्टी बनेको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरुको ईञ्छा पूरा गर्ने सामर्थ्य यिनै ओली र प्रचण्डसँगै छ ।
र, दुबै नेताहरु वाम एकताबाट पछाडि फर्किने अवस्था गुमिसकेको छ । अर्थात् प्रचण्डकै भाषामा भन्दा पछाडि फर्किने पुलै भत्किइसकेको छ । दुबै नेता समानरुपमा जनमतको नैतिक बन्धनमा अनुबन्धित भएका छन् ।
तर, ओली र प्रचण्डलाई आपसमा मिल्न नदिने ‘तत्व’ हरु पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । तिनीहरु एमाले र माओवादीभित्रमात्रै नभई यत्रतत्र, सर्वत्र छन् । दिगमा छन् । कालमा छन् र सार्वभौमिकतामा छन् ।